PES Vagadziri uye Vatengesi - China PES Fekitori
Iyo yakagadziridzwa polyester zvinhu zvakagadzirwa chigadzirwa nebepa rakaburitswa. Iyo ine nzvimbo inonyunguduka kubva pa47-70 ℃, hupamhi hwe1m iyo inokodzera zvigadzirwa zveshangu, zvipfeko, Zvishongedzo zvemotokari, machira epamba uye mimwe minda, senge bheji rekushongedza. Ichi chitsva zvinhu compolymer kuti yakaderera ba ...
Uku kutsanangurwa kwakafanana ne114B. Musiyano ndewekuti iwo ane akasiyana melting index uye yekunyungudika maseru Iyi ine yakakwira yakanyunguduka temprature. Vatengi vanogona kusarudza yakakodzera modhi zvinoenderana nezvavanoda maitiro uye akasiyana uye mhando yemachira. Uyezve, tinogona c ...
Ichi ndicho chirevo chakaitwa nePES. Iyo ine dense kwazvo mesh mamiriro, inoitendera kuti iwane yakanaka kufema. Kana ikasanganiswa nemachira, inogona kutora simba rekubatanidza uye kugona kwemhepo kwechigadzirwa. Inowanzo shandiswa kune zvimwe zvigadzirwa zvinoda iine yakakwira mhepo pe ...